एनआरएनको माग पुरा हुनेगरी नागरिकता ऐन संसोधन ! « Sansar News
एनआरएनको माग पुरा हुनेगरी नागरिकता ऐन संसोधन !
१६ माघ २०७५, बुधबार ०९:५९
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन २०६३ मा एनआरएन नागरिकता माथिको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले गैरआवासिय नेपाली (एनआरएनए) ले उठाएका केही चासो र गुनासो समेतको सम्बोधन गर्दै सो संसोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
संसोधन प्रस्तावको दफा ७ क देखी ङ सम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने विषय बस्तु माथि छलफल गरेर टुंगो लागेको हो । बैठकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्वन्धि विषय बस्तुलाई मात्र किनारा लगाए पनि नागरिकता सम्वन्धमा अन्य विषयमा भने छलफल बाँकी रहेको छ ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयकबारे उठेका प्रश्नहरुबारे जवाफ दिएका थिए भने गृहसचिव प्रेम कुमार राईले वास्तविक नेपालीलाई सहज ढंगले नागरिकता दिलाउन र फर्जी नागरिकता वितरणमा कडाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आफूहरु गम्भीर भएको जानकारी दिएका थिए । विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै मन्त्रालयले अब संसदमा टेबल गर्नेछ ।